Linux 5.11 inouya nekuvandudzwa kweBtrfs, rutsigiro gadziriso ye AMD, USB4 uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Linux 5.11 inouya nekuvandudzwa kweBtrfs, inotsigira rutsigiro rwe AMD, USB4 uye nezvimwe
Mushure memwedzi miviri yekuvandudza, Linus Torvalds akazivisa mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeLinux kernel 5.11 uye mukuburitswa kutsva kweshanduko dzinonyanya kuzivikanwa, tinogona kutaura rutsigiro rweIntel SGX yakavharirwa, nzira nyowani yekudzivirira mafoni ekufona, bhazi rekubatsira, nekukurumidza kusefa kwenzvimbo kufona mu seccomp, kurega kugadziriswa kweiyo ia64 kuvaka, kugona kuvhara SCTP muUDP.
Shanduro nyowani akagamuchira 15480 gadziriso kubva muna 1991 vagadziri, chigamba saizi iri 72MB (Shanduko dzakabata mafaira 12090, 868,025 mitsara yekodhi yakawedzerwa, mitsara 261,456 yabviswa). Inenge 46% yeshanduko dzese dzakaburitswa muna 5.11 dzakabatana nematyaira emidziyo, ingangoita 16% yeshanduko inoenderana nekuvandudza iyo chaiyo kodhi yezvivakwa zvehardware, 13% zvine hukama nesitaki stack, 3% zvine hukama nemafaira masystem uye 4% ane hukama neyemukati kernel subsystems.
Main nyowani maficha eLinux 5.11
Mune ino vhezheni nyowani yeLinux Kernel 5.11, tinogona kuwana izvozvo akawedzera akati wandei sarudzo kumakara eBtrfs ekushandisa kana uchidzosera data kubva kune yakashata mafaera, pamusoro pekubvisa rutsigiro rwemberi yakadzikiswa "inode_cache" gomo sarudzo, kodhi yakagadzirirwa kutsigira mabhuroko metadata uye dhata diki pane peji (PAGE_SIZE), pamwe nerutsigiro rwekugoverwa kwenzvimbo nenzvimbo.
kunze kwaizvozvo chishandiso chitsva chave kuwedzerwa kudimbura system mafoni, Yakavakirwa prctl () uye iyo inobvumidza kukanda zvisarudzika kubva kune mushandisi nzvimbo kana uchiwana yakatarwa sisitimu yekufona uye kuteedzera kuitiswa kwayo. Uku kushanda kunokumbirwa muWine neProton kutevedzera maWindows system mafoni, izvo zvinodikanwa kuverengera kuenderana nemitambo uye zvirongwa zvinonyatso ita nhare dzehurongwa pasina kupfuura neWindows API (semuenzaniso, kudzivirira pakushandiswa zvisina mvumo).
Zvekuvakwa RISC-V, rutsigiro rweContiguous Memory Allocator memory allocation system yakawedzerwa (CMA), iyo yakagadziriswa kuti igovane yakakura contiguous ndangariro nzvimbo uchishandisa peji kufamba maitiro. ZveRISC-V, kune zvakare maturusi akaisirwa kudzora kupinda kune / dev / mem uye kuverenga kwenguva yekugadzirisa nguva.
Zvemaitiro 32-bit ARM, rutsigiro rweKASan debugging chishandiso chawedzerwa (kernel kero sanitizer), iyo inopa kukanganisa kwekuona kana uchishanda neyekuyeuka. Yee64-bit ARM, iko KASan kuitiswa kwaendeswa kushandisa MTE (MemTag) ma tag.
Nezve Virtualization uye chengetedzo, iyo system yekufona inomira pachena seccomp () iyo yakawedzera tsigiro yekukurumidza mhinduro modhi, iyo inokutendera iwe kuti ukurumidze kuona kana yakatarwa sisitimu yekufona inobvumidzwa kana kurambwa zvichibva pane yenguva dzose chiito bitmap yakasungirirwa munzira iyi, iyo isingade kutanga mubati BPF.
Zvakare, tinogona kuwana zvimwe Yakabatanidzwa kernel zvikamu zve enclave zvisikwa uye manejimendi anoenderana neIntel SGX tekinoroji (Software Guard eXtensions), iyo inobvumidza maapplication kuita kodhi munzvimbo dzakasarudzika uye dzakavharirwa ndangariro, idzo mukana wekuwana kune yakasara sisitimu inorambidzwa.
Kune masystem eARM64, kugona kushandisa MTE (MemTag, Memory Tagging Extension) ma tag echiratidzo ekubata memory kero akawedzerwa. Iko kushandiswa kweMTE kunogoneswa nekutsanangudza iyo SA_EXPOSE_TAGBITS sarudzo muSigaction () uye inokutendera kuti uone kutendeseka kwekushandiswa kwezvinongedzo kudzivisa kushandiswa kwehunyoro.
Pakupedzisira kune chikamu chevatongi, Tsigiro yeIntel Maple Ridge Yekutanga Discrete USB4 Host Controller Yakakwidziridzwa, pamwe nerutsigiro rwe AMD "Green Sardine" APUs (Ryzen 5000) uye "Dimgrey Cavefish" GPUs (Navi 2), pamwe nerutsigiro rwekutanga rwe AMD Van Gogh APUs neZen 2 musimboti uye RDNA 2 (Navi 2) GPUs. Wakawedzera rutsigiro rweRenoir APU IDs nyowani (yakavakirwa paZen 2 CPU uye Vega GPU).
Mutyairi weNewuau anowedzera rutsigiro rwekutanga rweNVIDIA GPUs zvinoenderana ne »Ampere» microarchitecture (GA100, GeForce RTX 30xx), parizvino inogumira kumavhidhiyo modhi kudzora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Linux 5.11 inouya nekuvandudzwa kweBtrfs, inotsigira rutsigiro rwe AMD, USB4 uye nezvimwe
Ndakaona kuti vakaita Valentine kuzvipira munyama ini ndikasara neuso hwe, chii?